Nyanzvi Dzozeya Mamiriro Akaita Zvinhu Munyaya yeSarudzo Yepiri
Zvichitevera kutarwa kwaitwa zuva rekudzokorora sarudzo yemutungamiri wenyika, veruzhinji vave kutarisira kuti mhirizhonga iri kuitika munyika pari zvino, imiswe kuitira kuti vanhu vari kutiza misha yavo, vakwanise kudzokera kumisha yavo kuitira kuti vagokwanisa kuvhota.
Vatsigiri vebato reMDC vakawanda vari kushungurudzwa zvichitevera kukunda kwakaita bato ravo musarudzo dzapfuura. Zanu PF iri kutyira kuti ingangokundwa zvakare mu run off iyi, izvo zviri kupa kuti ishungurudze vanoipikisa.
Vamwewo ndivo vari kuti ZEC pachayo haina kugadzirira zvakakwana kuti iite sarudzo iyi zvichitariswa matambudziko akatarisana nesangano iri, uye kusungwa kwevashandi varo vachipomerwa mhosva dzekubatsira mukubiridzirwa kwesarudzo.
Mukutarisa zvingangoitika musarudzo iyi, Jonga Kandemiiri weStudio 7 abata nyanzvi yezve matongerwo enyika, VaGlen Mpani, pamwe nasachigaro weZESN, VaNoel Kututwa, avo vanoti chinhu chakanaka kuti ZEC yatara zuva resarudzo, asi chava kudiwa pari zvino kumiswa kwemhirizhonga.